प्रदेश ६ - KagajPatra Media Network
मिति: २०७७ मंसिर १२ गते शुक्रबार
फागुन ३ बनेपा । कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएकाे छ । मृत्यु हुनेमा धनगढी – २ का पदमनिधि पण्डित रहेका छन् । अत्तरियाबाट गोदावरी तर्फ जाँदै गरेको से.७ प. ४०७९ नम्बर को मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई गोदावरी नगरपालिका–२ तेघरीमा शुक्रबार राति दुर्घटना हुँदा उनी घाइते भएका थिए । […]
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ गण्डकस्थित अमृत प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी
माघ २२ बनेपा । वीरगञ्ज महानगरपालिका-१४ गण्डकस्थित अमृत प्लास्टिक उद्योगमा बुधबार बिहान आगलागी भएको छ । आगलागीबाट करिब ७० लाख मूल्य बराबरको धनमाल जलेर क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । दमकलको सहयोगमा अग्नी नियन्त्रक, सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीबासिन्दाको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आगलागी कसरी भयो भन्ने बारे थप अनुसन्धान […]
माघ ०५ बनेपा । रोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ । आइतबार दिउँसो त्रिवेणी गाउँपालिका-४ ह्वापखोलास्थित सडकमा मे१ज १९१५ नम्बरको जीप चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार माडी गाउँपालिका-१ बस्ने ३८ वर्षीय मनसुर वलीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । जीप चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको छ ।
गोरु काटेको आरोपमा इलामबाट दुई व्यक्ति पक्राउ
माघ ०२ बनेपा । गोरु काटेको आरोपमा इलाम सूर्योदय नगरपालिका–९ को रम्फोकबाट दुई व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रम्फोककै ३८ वर्षीय निमा तामाङ र ३८ वर्षीय पेमा तामाङ रहेका छन् । गाउँमा गोरु काटिरहेको खबर पाएपछि गोप्य सूचनाका आधारमा फिक्कल प्रहरीचौकीका प्रमुख बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले घटनास्थलबाट […]
पुस १७ बनेपा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नं. ७ मा जीप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ जना घाइते र एक जना बेपत्ता छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुदूरपश्चिमका एसएसपी देवबहादुर बोगटीका अनुसार से १ ज १०६४ नम्बरको जिप सडकबाट कर्णाली नदीमा खसेको थियो । बेपत्ताको […]
कञ्चनपुरमा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या
पुस १४ बनेपा । कञ्चनपुरमा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या भएको छ । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले सौतेलो बाबुलाई पक्राउ गरेको छ । बालिकाको बलात्कार र कुटपिटपछि हत्या भएको आशंकमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाे छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले सोमबार दिउँसो बालिकाका सौतेलो बाबुलाई पक्राउ गरेको हो । भीमदत्त […]
नवलपरासी (पूर्व) को गैंडाकोटमा ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु
मंसिर १९ बनेपा । नवलपरासी(पूर्व) को गैंडाकोटमा ट्रकले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१० बस्ने २६ वर्षीय बीरेन्द्र गिरी रहेका छन् । गैंडाकोट नगरपालिका-२ नमस्ते चोकस्थित सडकमा ना. ६ प ८०५८ नम्बरको ट्रकले ना.३१ प २६१८ नम्बरको स्कुटरलाई बिहीबार बिहान ठक्कर दिँदा […]
आगो लगाएर युवतीकाे हत्या गरेको आरोप
मंसिर १९ बनेपा । शिखर नगरपालिकाकी एक युवतीको आगो लगाएर हत्या गरेको आरोप लागेको छ । जिल्लाको शिखर नगपालिका वडा नं ४ मुडभराकी २६ वर्षीया भावना भट्टको आगो लगाएर हत्या गरेको माइती पक्षले आरोप लगाएका हुन् । उनका परिवारकै सदस्यले पेट्रोलियम पदार्थ छर्किँदै आगो लगाएर हत्या गरेको भावनाका दाइ शालिग्राम […]
मरेको कुखुराको मासु खाँदा मंगलबार एक किशोरीको मृत्यु
मंसिर ०३ बनेपा । मरेको कुखुराको मासु खाँदा मंगलबार एक किशोरीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा पुर्चौंडी नगरपालिका–२ जरसौँका १५ वर्षीया पुष्पा पार्की रहेकी छन् । मासु खाँदा एउटै परिवारका नौ जना बिरामी भएका छन् । शनिबार साँझ मरेको कुखुराको मासु घरपरिवारका सबै सदस्यले खाएको र आइतबारदेखि बिरामी परेका […]
नेपाल टेलिकमको टावर एक सातादेखि बिग्रिँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
कार्तिक २९ बनेपा । जिल्लाको बडिमालिका-५ मनामा रहेको नेपाल टेलिफोन टावरको सेवा एक सातादेखि अवरुद्ध बनेको छ । नेपाल टेलिकमको टावर एक सातादेखि बिग्रिँदा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । यसअघि नियमित सञ्चालनमा रहेको टावर एकाएक बन्द भएपछि फोन सम्पर्कविहीन हुनु परेको स्थानीय कर्णबहादुर दानीले बताए । […]